मेकअपको फाइदा र साइड इफेक्ट्सहरु। - Varient - News Magazine
Jul 23, 2021 - 11:09
आजकल सौन्दर्यको ख्याल राख्नु धेरै महत्वपुण र जरुरि हुन्छ। चाहे कार्यालय जानु अघि होस वा कलेज वा तपाईं गृहिणी भएपनि मेक अप जरुरि हुन्छ । सुन्दर अनुहारले सबैको ध्यानआकर्षण गर्दछ। तपाईंको सुन्दर अनुहारले तपाइमा आत्मविश्वास आउने गर्दछ। यदि तपाईं आफ्नो अनुहार उज्यालो र सुन्दर बनाउन चाहानुहुन्छ भने, तपाईं मेकअपको मद्दत लिन सक्नुहुन्छ। महिलाहरू प्राकृतिक सौन्दर्य र श्रृंगारको सहयोगमा पनि उनीहरू सुन्दर देखिन्छन्। यस लेखमा, हामी तपाईंलाई मेकअपका फाइदाहरू यसका साथै बेफाइदाहरुको बारेमा समेत भन्नेछौ ।
मेकअप का फाइदाहरु।
१. आफ्नो छाला अनुसार मेकअप छान्नुहोस्।
यदि तपाई मेकअपको फाइदा लिन चाहानुहुन्छ भने तपाईको छाला अनुसार छाला लाई असर नर्गने मेकअपका साम्रगीहरु किन्नुहोस्। धेरै जसो केसमा मेकअपका सामानहरु हानिकारक हुँदैन, तर केहि अवस्थाहरूमा छालासँग सम्बन्धित समस्या निम्त्याउन सक्छ। समस्याहरूबाट बच्न, प्राइमर, पाउडर र फाउन्डेशन प्रयोग गर्नुहोस् जुन तपाईंको छालाको लागि उपयुक्त हुन्छ।
वइलि छाला भएका महिलाहरुले तेलजन्य उत्पादनहरू किन्नुहुन्न। त्यस्ता उत्पादनहरू प्रयोग गर्दा छालाका छिद्रहरु बन्द हुन्छ र वइलि फेस र डन्डिफोरको समस्या हुन सक्छ। एलर्जी भएका व्यक्तिहरूले त्यस्ता एसिडहरू, वा सुगन्धित तेलहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन।
२. मेकअपमा पौष्टिक तत्व हुन्छ।
कतिपय मेकअपका सामानहरुमा अत्यधिक केमिकल हुन्छन् जुन तपाईंको छालाको लागि हानिकारक हुन्छ। तर धेरै मेकअप उत्पादनहरू जसमा भिटामिन सी, भिटामिन ई, एन्टीएजिंग गुणहरू आदि हुन्छन्। छालाको श्रृंगारका फाइदाहरू लिन, पहिले राम्रोसँग मेकअपको विवरणहरू जान्नुहोस्।
३.अर्गानिक मेकअपका सामानहरुको प्रयोग।
तपाईं अर्गानीक मेकअपका साम्रगीहरु पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ किनकि यसमा प्राकृतिक तत्वहरू हुन्छ र कुनै रासायनिक हुँदैन, साथै प्राकृतिक सुगन्ध हुन्छ, पौष्टिक तत्त्वहरूले भरिपूणर् हुन्छ, र छालामा कोमल विधिहरू बाट कार्य गर्दछ।
४.छाला सुख्खा हुदैन।
फाउन्डेशन वा पाउडरले तपाईंको छालालाई सुक्खा र निर्जीव बनाउँछ। छाला विशेषज्ञहरू भन्छन कि यस्ता उत्पादनहरूले छाला फुट्ने र चाउरिपना देखा पर्छन्। सुख्खा छालाको समस्या हटाउन हाइड्रेटिंग फाउन्डेशन वा हाइड्रेटिंग पाउडर प्रयोग गर्नु धेरै राम्रो हुन्छ तर तपाईले यो लगाउनु भन्दा ५ मिनेट अघि मोइश्चराइजर लगाउन सक्नुहुन्छ ताकि दिनभरि छाला सुक्दैन।
५.फेस पाउडरले धुलोमाटो अनुहारमा टाँसिदैन।
मेकअपको अन्त्यमा हल्का पाउडर पनि लगाउनुहोस्। फेस पाउडरले, फाउन्डेशन र मोइश्चराइजर लामो समयको लागि अनुहारमा रहन्छ, र छालामा धुलो टासीदैन र छालामा पानीको अभाव समेत हुँदैन। मेकअप लागू गर्नाले छाला सम्बन्धी समस्याहरू हट्दछ, साथै यसले तपाईंको आत्मविश्वास पनि बढाउँदछ, र अन्य व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्न समेत आत्मविश्वास दिन्छ
मेकअप श्रृंगारका हानिहरू।
१. टाउको दुखाई।
मेकअपका साम्रगीहरुमा रसायनहरू जस्तै डायजोलिडिनेल यूरिया र डीएम डीएम हाइडान्टोन र फोरमल्डिहाइड जस्ता तत्वहरु मिसाइएको हुन्छ। यी रसायनहरूले टाउको दुख्ने, शरिरको विभिन्न झिल्लीमा समस्या पैदा गर्दछ र आँखालाई नोक्सान पुर्‍याउन सक्छ। यदि तपाइँलाई दिनहुँ टाउको दुखछ र यसको कारणहरू थाहा पाउँनु भएन भने, केहि दिनको लागि मेकअप लागू नगर्नुहोस्।
२.एक्ने वा डन्डीफोर।
मेकअपका श्रृंगारका सामागी्हरुमा साइड इफेक्टहरू हुन्छन जसले धेरै महिलाहरूलाई एक्नेको समस्या हुन सक्छ। अन्य अंगहरू जस्तै छाला पनि शरीरको एक अंग हो जसलाई सास फेर्न जरुरत हुन्छ। जब तपाइँ मेकअप गर्नुहुन्छ अनि छाला कभर गर्नुहुन्छ, तपाइँका छिद्रहरू पनि बन्द हुन्छन्। केही मेकअप, जुन तरल र क्रीमको रूपमा हुन्छ, त्यसले छालाका पेरहरू बन्द गर्दछ। यसले ब्ल्याकहेड्स,एक्नेको समस्या पैदा गर्दछ। यस्तो समस्या बाट बच्न राती सुत्नु अघि प्राकृतिक क्लीन्जरले मेकअप हटाउन नभुल्नुहोला।
रासायनिक, जसलाई प्याराबेन्स रसायन भनिन्छ, जसमा ईथिल प्याराबेन्स, बुटाइल प्याराबेन्स र आइसोप्रोपाइल प्याराबेन्स हुन्छ। तिनीहरूलाई मेक अपका साम्रगीहरुमा प्रयोग गरिन्छ। प्याराबेन्सले विभिन्न एलर्जी सम्बन्धी समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ जस्तै छाला चिलाउँने पोल्ने, फुट्ने आदी। कुनै कस्मेटिक आइटम खरीद गर्नु अघि, उत्पादनमा प्याराबेन्स मिसाइएको छ कि छैन भनि जानकारी पढ्नुहोस्।
अनुहारको मेकअप गर्दा आँखाको पनि मेकअप गर्ने गरिन्छ। तर यो याद गर्न धेरै महत्त्वपूणर् हुन्छ कि आँखा वरिपरिको छाला एकदमै संवेदनशील हुन्छ जसले कारणले गर्दा असर पर्न सक्छ। आँखाको मेकअपले तपाईंको आँखा खराब हुन सक्छ, र इरिटेसन पैदा गर्न सक्छ। अत्यधिक मस्करा र आईलाइनर प्रयोग गर्दा आँखाको बृद्धि रोकिन्छ र आँखा संक्रमण पनि हुन सक्छ।
५.उमेर भन्दा पहिले एजिंगको समस्या।
जब तपाईं लामो समय सम्म श्रृंगारका उत्पादनहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यसमा भएको रासायनिक पर्दाथले तपाईंको छाला लाई बिगार्न सक्छ। दैनिक मेकअप गर्नुभयो भने तपाइको छालामा एजिंगको समस्या जस्तै चाउरि पर्ने चिलाउने आदी समस्या हुन सक्छ। मेकअपका साम्रगीहरु लामो समयको लागि प्रयोग गर्नाले तपाईंको छालामा विपरित असर पर्न सक्छ।
मेकअपको अन्य बेफाइदाहरु:
मेकअपले तपाईको छालालाई मात्र असर पुर्‍याउँदैन यसका साथै तपाईको कपालमा झर्ने समस्या उत्पन्न हुन थाल्छ, बांझोपनको समस्या उत्पन्न हुन्छ, हर्मोनहरू असंतुलित हुन्छन्, क्यान्सर हुन सक्छ, र छालाको रंग समेत परिवर्तन हुन्छ।